अहिले केही मन्त्रीहरूको हेरफेरको कुरालाई लिएर अनावश्यक चर्चा भएको देखेर धरहरा पनि चकित भएको छ। मन्त्री हेरफेर गर्ने भनेको संसदीय लोकतन्त्र भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको संविधान प्रदत्त अधिकार हो। उहाँले संविधानभन्दा
बन्द कोठाबाट निस्किएपछि
छिमेकीबाट पीडित एक परिवार न्यायका लागि प्रहरीकहाँ पुगेछन्। प्रहरीले पीडितको कुरो सुन्ने नै भयो। शुरूमा प्रहरीले पीडितको कुरो सुनेजस्तो पनि गर्यो। पीडित न्याय पाउने भइयो भन्दै घरतिर हिँडे। पीडिकलाई प्रहरीले
राजनीतिमा इमान्दारिता र नैतिकता चाहिने हो। तर, आफैंले बनाएको नीति र विधि भत्काउँदै स्वार्थशिद्धको राजनीतिमा लागेपछि कसको के लाग्छ र ? दुई दशकदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविहीन छन्। बल्ततल्ल सरकारले निकै
सपिङ सेन्टरको कथा
अहिले स्कुल स्कुलमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा भोलिदेखि शुरू हुन लागेको छ। सरकारले परीक्षाको अनुगमन गर्न सरकारी शिक्षकलाई विभिन्न ठाउँमा खटाएको पनि छ। परीक्षा शुरू हुनुअघि स्कुलेको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन
मुलुकको चौथो ठूलो दल राप्रपा सरकारमा गएको प्रसंगले प्रधानमन्त्री पुकदा अहिले निकै दंग हुनुहुन्छ। कारण मधेसी मोर्चाले भनेअनुसार संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने आशा। त्यति भइदियो भने कुर्सी जोगिन्छ भन्ने उहाँलाई
नेपालमा जहिले पनि दलहरूले आन्दोलन गर्ने धम्की दिने गरेका छन्। के हो यो आन्दोलन नबुझेर जनता हैरान भइरहेका छन्। जुन नेता जता गयो भन्दिहाल्छ। अब आन्दोलन गर्ने हो। जनता र
मुलुकमा रगतको होली शुरू भएको बेलामा नेपाली जनता आज रङको होली खेल्ने तयारी गरिरहेका छन्। सप्तरी र कञ्चनपुरमा रगतको होली खेल्ने काम भएको छ। कुनै नेपाली राज्यबाट खेलिएका होली हुन्
उताका मुनी,यताका ढोंगी
सधैं नेपाल मामिलामा हस्तक्षेपकारी भनाइ राख्दै आएका भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले समेत कञ्चनपुरमा भएको घटनालाई एसएसबीबाट भएको ब्लन्डर भनेर ट्वीट गरेको देखियो। उनले भारतले सकेसम्म चाँडो माफी माग्नुपर्छ र क्षतिपूर्ति
प्रहरीको नयाँ धन्दा
समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने खटिने प्रहरी बेला–बेलामा राम्रो कामले चर्चामा पुग्छ त। कहिलेकाहीं प्रहरीले लिने नीतिले विवादिन बन्ने गर्छ। प्रहरीले कुनै पनि अपराधीलाई पक्राउ गर्दा ठूलो हल्लाखल्ला गरेर नाम
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच भिडन्त हुने गरेको दृश्य धरहराले लामो समयदेखि देख्दै र सुन्दै आएको हो तर नेपालमा त सत्ता पक्षबीच नै आन्दोलन भएर सत्ता पक्षका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले गोली
कस्तो पीएचडी ?
पढे लेखेकाले देश बनाउँछन् भन्ने उखान नेपालमा लामो समयदेखि चलिएको हो तर यो उखान भने अहिलेको युगमा काम नलाग्ने भएको हो कि भन्नेमा धरहरा पुगेको छ। पढे लेखेका त्यसमा पनि
मेची–काली अभियान शुरू गरेको प्रमुख विपक्षी अहिले अप्ठइरोमा परेको छ। अप्ठइरो पनि किन नपर्नु जहाँ ओली त्यहाँ गोली हुन थालेपछि यस्तो अवस्था आएको हो। काँकडभिट्टाबाट शुरू भएको यो अभियान सप्तरीको
संसद् बैठकको हिजोआज कुनै चालचुल छैन। त्यहाँ त मुलुकका गहन विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो तर त्यहाँ लामो समयदेखि सांसद महोदयहरुलाई छुट्टी छ। उनीहरुलाई पनि के मतलब तलब आइहाल्छ। संसद् खुलाइँदैन
धरहरावरपर अहिले पनि हालै सरकारले गरेको राजदूत सिफारिसको चर्चा भइरहेको छ। अमुक नेताहरू जसको कुनै जनाधार छैन त्यस्ताको जोडबलमा राजदूत नियुक्त गरिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ। जनताले विभिन्न माध्यमबाट अस्वीकृत